Dad Muslimiin ah oo lagu weeraray gaadiid ay saarnaayen - BBC News Somali
Dad Muslimiin ah oo lagu weeraray gaadiid ay saarnaayen
Ka hor inta aysan bilaaban doorahadhada dalkaasi Sri Lanka ayaa dableey hubeysan waxa ay weerar ku qaadeen basas ay saarnaayeen Muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi.
Weerarka ayaa waxa u ka dhacay waqooyi galbeed ee Jasiradda, waxaana la sheegay in uusan jirin qasaare badan oo soo gaaray Muslimiintaasi la weeraray. Waxaana la sheegayaa in laba haween ah ay ku dhaawacmeen dhagxaan ay ku weerareen dad aan heybtooda la garanayn.
Inkastoo ay arrintani dhacday haddana tirada dadka usoo baxay doorashada aad ayay u badnayd oo waxa la sheegay inay ka badnaayen boqolkiiba siddeetan 80%.
Doorashadaan ayaa ku soo aadeysa toddobo bilood ka dib markii ay dalkaasi ka dhaceen weeraradii bambaano oo ay ku dhinteen dad ka badan 250 qof. weerarrada oo lagu bartilmaameedsaday kaniisado iyo hoteelo ku yaalla Jasiirada ayaa waxaa mas'uuliyaddiooda sheegtay ururka isku magacaabay Dowladda Islaamka.
Muslimiin masaajidkoodii gacmahooda ku burburiyey cabsi awgeed
Doorashadaan madaxtinimada ayaa waxaa ku tartamaya ilaa 35 musharax waana doorashadii Saddexaad tan 2009-kii markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka socday muddo tobanaan sano ah.
Waxaa haatan la sheegaya in koonfurata Sinhalese uu ku hogaaminaya xoghayihii hore ee Wasaaradda Gaashanaadhigga Gotabaya Rajapaksa iyadoo dhanka kalana ninka uu loollanka kala dhaxeyo Sajith Premadasa uu ku hogaaminaya Waqooyi Sinhalese.
Image caption Gotabhaya Rajapaksa iyo Sajith Premadasa
Maxay codbixiyeyaasha doonayaan?
Aminga guud ee dalka ayaa la sheegayaa inay tahay arrinta ugu weyn ee ay daneynayaan, hase yeeshee sinnaanta dadka laga tirada badan yahay iyo shaqa la'aanta ayaa iyagana waxay ka dhex guuxeysaa Maskaxda cobixiyeyaasha.
Laakinse labadaan musharax ayaa ballan qaaday waxyaabo kala duwan oo ku aaddan caalamka. Mr Rajapaksa waxa uu sheegay inuu soo celinayo xiriirka shinaha iyo Sri Lanka haddii isaga la doorto, halka Mr Premadasa uu u weecanayo Hindiya iyo Mareykanka.